Tapaka nandritry ny filankevitry ny minisitra, ny 10 aprily 2019, fa hihamafy ny sazy azon’ireo manondrana antsokosoko ireo mpiasa malagasy makany ivelany, ary ireo izay rehetra fantatra fa nandefa ireto teratany malagasy nampodiana ka niharan’ny herisetra, na tsy nandray ny tambin-karamany. Ka ireo mpandefa sy ireo voarohirohy mivantana na ankolaka amin’ny fandefasana azy ireo no hanonitra ny
lany rehetra sy ny tambiny rehetra mahakasika ireo vehivavy Malagasy nampodiana.
Hisy koa ny fanarahamaso manokana ireo toerana fanondranana ireo vehivavy malagasy hiasa any ivelany izay voarara sy tsy nahazoan-dàlana ka harahi-maso akaiky ireo fivoahana ivelan’i Madagasikara amin’ireo zotram-piaramanidina mampitohy an’i Madagasikara amin’ireo faritra voarara ireo.
Hisy kosa ny laharana antariby manokana ahafahan’ny rehetra mifandray mivantana amin’ny tomponandraikitra manoloana ny kolikoly sy ny fanakanana tsy amin’antony atao ireo tera-tany malagasy miditra sy mivoaka etsy amin’ny seranam-piaramadina rehetra iraisam-pirenena.
Tsy hisy fahazoan-dalana
Tsy misy intsony fahazoandalàna hiasa mankany ivelany makany amin’ireo firenena tsy ahitana masoivohom-pirenena Malagasy, sy any amin’ireo toerana tsy manaja ny zon’olombelona ary any amin’ireo firenena tsy manana fehezandalàna mifehy sy manaja ny zo maha olona ny isambatan’olona.*